चिकित्सक समयमै नआएको भन्दै अस्पतालमा तोडफोड – The Public Today
चिकित्सक समयमै नआएको भन्दै अस्पतालमा तोडफोड
विजय कुमार सिंह असोज २७, २०७६ ७:२२ pm
राजविराज, असोज २७ गते : अस्पतालका चिकित्सक अबेरसम्म पनि नआएको भन्दै बिरामीका आफन्त र विद्यार्थीले सोमबार राजविराज स्थित ‘गजेन्द्र नारायण सिंह’ अस्पतालमा तोडफोड गरेका छन्।
प्रदर्शन र तोडफोडको कारण दिउँसो २ बजेदेखि अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बनेको छ। अस्पतालमा कार्यरत डा. ज्ञानेन्द्र झा र डा.प्रनेश यादव दिउँसो २ बजेसम्म नआउँदा आक्रोशित बिरामीका आफन्त तथा केही विद्यार्थीले नाराबाजी र तोडफोड सुरु गरेका थिए।
तोडफोडबाट डा. झा र डा. यादव बिरामी जाँच्न बस्ने कोठाको झयाल, ढोका, कुर्सी र टेबुल लगायतका सामानमा क्षति पुगेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। प्रहरीले तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा राजविराज १ निवासी गुन्जन झालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रदर्शन र तोडफोडमा उत्रेकाहरुले अबेरसम्म डा. झा र यादव अनुपस्थित रहँदा टाढा-टाढाबाट जचाउँन आएका बिरामीहरुलाई समस्या भएको र अस्पताल प्रशासनले पनि बेवास्था गरेको गुनासो गरे्का छन्।
अस्पताल प्रशासनले भने डा. झा विदामा रहेको र अर्का डा. यादव सो समयमा इमेरजेन्सिमा एक बिरामीको उपचारमा संलग्न रहेको बताएका छन्। स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएपछि अहिले अस्पताल परिसरमा व्यापकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी स्थिति सामान्य पार्ने प्रयास भइरहेको छ। –सौरभ यादव /अन्नपूर्ण पोस्ट